प्रचण्डको ‘सूर्य क्रेज’: भावनात्मक कि रणनीतिक ? – Nepal Press
प्रचण्डको ‘सूर्य क्रेज’: भावनात्मक कि रणनीतिक ?
हुँडलेर हाबी हुन माहिर प्रचण्ड
२०७७ माघ १ गते १३:५१
विभाजित नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आफ्नो समूहका कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै भने– सूर्य चिह्न नपाए यो देशमा कयामत हुन्छ । मंगलबार पोखराको कार्यकर्ता भेलामा पनि उनले सूर्य चिह्न नपाए आँधी आउने बताएका थिए ।
हिन्दी शब्द कयामतको नेपाली अर्थ हुन्छ, प्रलय । उनले सूर्य चिह्न नपाए प्रलय नै हुन्छ भन्नुसँग राजनीतिक विषय जोडिएको छ । २०७४ असोज १४ गते सूर्य चिह्नबाट चुनाव लड्ने सहमति गरेर तीन दिनपछि सूर्य अस्वीकार गरेका प्रचण्डमा अहिले सूर्य नपाए प्रलय हुने सोच आउनु आफैंमा महत्वपूर्ण हो ।
राजनीतिमा चुनाव चिह्न प्राविधिक मात्रै नहुँदो रहेछ । तर, कुनै बेला सूर्य चिह्नलाई देखि नसक्ने प्रचण्डलाई आज किन त्यही चिह्नको मोह बढिरहेको छ ? उनको अस्वभाविक ‘सूर्य क्रेज’सँगै केही स्वभाविक राजनीतिक सवाल उब्जिएका छन् ।
चुनाव चिह्न निर्वाचन आयोगले दिने हो । जहाँ दलले आफूले पाउने चिह्न दावी गर्न पाउँछ । २०४८ सालदेखि नेकपा एमालेले पाएको सूर्य चिह्न अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को छ । तर आधिकारिक नेकपा चाहिँ कुन हो ? भन्ने विवाद छ ।
अध्यक्ष, महासचिव र माइन्यूट भएको पार्टी आधिकारिक हुने कि अध्यक्षलाई हटाएर अर्को अध्यक्ष चयन गरेको पार्टीले आधिकारिकता पाउने भन्ने विवाद निर्वाचन आयोगमा छ । दुवै पक्षले सूर्य चिह्न आफ्नो हुने दावी गरेर कार्यकर्तालाई हौस्याइरहेका छन् ।
दुबै पक्षले निर्वाचन आयोगमा आफूहरु आधिकारिक भएको दावी पेश गरेका छन् । प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले आफूहरुसँग बहुमत केन्द्रीय सदस्य भएकाले केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गरी अध्यक्षबाट हटाएको बताइरहेको छ । ओली पक्षले भने पार्टी विभाजित नभएको, तर कमिटीहरु पुनर्गठन भएको बताएको छ ।
अझै थाहा छैन, चिह्न कसको हुन्छ ? तर अहिलेको मूल लडाइँ नै चिह्नकेन्द्रित छ । किनकि, सूर्य चिह्नसँग नेकपा कार्यकर्ता मात्रै होइनन्, आमनागरिकको भावना जोडिएको छ ।
उनले पार्टीमा समस्या भयो भने पहिले पनि विघटन गरेर नयाँ पार्टी निर्माण गरौं भन्ने गर्थे । मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, बादलहरुलाई आपसमा लडाइरहने र उनीहरु मिले भने पार्टी भत्काउँ भन्ने उनको पूरानो शैली थियो ।
तत्कालीन एमालेको ब्राण्डिङ चुनाव चिह्न हो, सूर्य । तत्कालीन माओवादीले यसअघिको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनाव एमालेसँग गठबन्धन गरे पनि चुनाव चिह्न गोलाकारभित्रका हँसिया हथौडा नै लिएको थियो ।
पार्टी एकताका बेला पनि सूर्य चिह्न राख्नेबारे तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच लामै बहस भएको थियो । माओवादीको समेत भावना समेटिने गरी गोलाकारभित्र सूर्य राख्ने भन्ने बहस पनि भएको हो । तर पार्टी एकतापछि निर्वाचन आयोगले नवगठित नेकपालाई उक्त चिह्न दिएको छ ।
यसअर्थमा तत्कालीन एमालेका नेता, कार्यकर्तालाई सूर्य चिह्नको लोभ लाग्नु स्वभाविक हो । प्रचण्डसँगै रहेका पूर्व एमालेका नेताहरु माधव, झलनाथ खेमाका कार्यकर्ताको ‘सूर्य–मोह’ पनि स्वभाविक छ । तर, प्रचण्डको सूर्य क्रेज स्वभाविक छैन ।
२०६४ र २०७० सालको संविधानसभा र २०७४ को स्थानीय तथा आम निर्वाचनमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा चिह्न लिएर चुनावी मैदानमा थियो ।
ती चुनावहरुमा तत्कालीन माओवादीले कांग्रेस भन्दा एमालेलाई नै बढी प्रतिस्पर्धी ठान्थ्यो । कम्युनिष्ट भएकाले एमालेकै भोट बढी तान्न सकिने माओवादी बुझाइ थियो । त्यसैले त्यतिबेला माओवादीले एमाले र एमालेको चुनाव चिह्न सूर्यमाथि खुबै हमला गर्यो ।
सूर्य चिह्न अंकीत पोस्टर छोपेर हँसिया हथौडा टास्यो । सूर्य चिह्न अंकीत झण्डा फालेर हँसिया हथौडा राख्यो । कम्युनिष्ट पार्टी भएकाले हँसिया हथौडाप्रति माओवादीको प्रेम हुनु स्वभाविक थियो । तर, अहिले आएर प्रचण्डलाई हँसिया हथौडा भन्दा सूर्यप्रति किन मोह बढिरहेछ ?
हुन त पछिल्ला भाषणहरुमा प्रचण्डले एमाले ब्राण्डको जनताको बहुदलीय जनवाद र मदन भण्डारीको प्रशंसामा बढी समय खर्चिरहेका छन् । सूर्य चिह्न नपाए कयामत हुने उनको चेतावनी त्यसको निरन्तरता हुन सक्छ ।
प्रचण्डको ब्राण्डिङ विशेषता नै हो, हुँडलेर हाबी हुने । सधैं शक्तिमा रहन अनेक प्रयोग गरिरहने । सकेसम्म शासन गर्ने, नसके फुट्ने, फुटाउने, चोइटिने, चोइट्याउने मामलामा प्रचण्ड खेलाडी नै हुन् ।
मोहन वैद्यलाई २०४३ तिर सेक्टर काण्ड लगाएर कारवाही गरेपछि तत्कालीन नेकपा मशालको महासचिव बनेका प्रचण्डले त्यसयता कहिल्यै पनि पार्टीको प्रमुख नेतृत्व छाड्नु परेको छैन । एमाले एकतापछि केपी ओलीपछिको वरीयतामा बस्नु परेबाहेक उनी सधैं फस्टम्यान हुन् ।
नेकपा मशाल, एकता केन्द्र, नेकपा माओवादी, एकीकृत नेकपा माओवादी, माओवादी केन्द्र हुँदै नेकपासम्म आइपुग्दा उनले कहिल्यै अध्यक्ष वा तत्कालीन अवस्थामा महासचिव पद छाड्नु परेन ।
केपी ओलीविरुद्ध अहिले प्रचण्ड–माधव नेपालको जोडी खुब जमेको छ । प्रचण्डले आफूहरु एक अर्कामा विलय भएको बताउनु र पछिल्ला सार्वजनिक कार्यक्रममा एकले अर्काको प्रशंसामा भाका हाल्नुले दुईजनाको मिलाप लामै समय यसैगरी चल्न नसक्ने देखाउँछ ।
सधैं सुप्रिमो हुन मन पराउने प्रचण्डलाई केपी शर्मा ओलीको सामना गर्न पक्कै कठिन थियो । ओलीबाट कसरी अपमानित भएँ भनेर उनले पार्टी विभाजनपछि खुलाइरहेका छन् । दोस्रो मर्यादादेखि कुर्सीकाण्डसम्मका कुरा अहिले आइरहेका छन् ।
प्रचण्ड पार्टीभित्र महाधिवेशनबाट कार्यकर्ताको मत लिएर कहिल्यै पार्टी प्रमुख बनेनन् । राष्ट्रिय सम्मेलन वा महाधिवेशन जे भने पनि तत्कालीन माओवादीमा सदस्यहरुबाट प्रत्यक्ष नेतृत्व चुनिने व्यवस्था नभएकाले प्रचण्डले कार्यकर्ताको मत जित्नु परेन ।
विभाजनपछि प्रचण्ड पहिलो अध्यक्षका रुपमा हेरिए । तर जसले बैठकको अध्यक्षता गरेको छ, अर्को वैठकसम्म उही पहिलो वरीयतामा रहने समझदारी अनुसार आफू माधव नेपालपछिको वरीयतामा रहेको प्रचण्ड आफैंले बुधवार कार्यकर्ता भेलामा बताए ।
पूर्व एमालेको मनोविज्ञान बुझेर पनि प्रचण्डले यो चलाखी गरेका हुनसक्छन् । तर व्यवहारमा प्रचण्ड नै पहिलो अध्यक्षका रुपमा देखिने निश्चित छ । किनकि उनको स्वभाव नै त्यही छ ।
विगतमा जहाँ गयो त्यही राज्य दिन्छु भनेर धोखा दिएको सम्झिने जातीय नेताहरु प्रचण्डले माधव–झलनाथलाई पनि धोका दिएको देख्न कार्यकर्ताहरु तयार भए हुन्छ भन्न थालेका छन् । किनकि, प्रचण्डले धोका दिन बाँकी अब अरु बाँकी छैनन् ।
एमाले भित्र छिरेर, समीकरणको हुँडलो मच्चाएर माधवहरुलाई त्यहाँबाट निकालेर प्रचण्डले ओलीसँगको लडाइँको मोर्चा बलियो बनाए । मञ्चमा माधव नेपाल निन्याउरो र कान्तिहीन अनुहार लिएर ओलीलाई सरापेको सुन्नमा आनन्द मानेजस्तो गरिरहेका छन् ।
धेरैले सोचेका थिए, पार्टी विभाजन भयो भने पूर्व एमालेको बहुमत हिस्सा आफूतिर पार्नका लागि भने पनि प्रचण्डले माधव नेपाललाई केही समय एकल अध्यक्ष दिनेछन् । तर प्रचण्डबाट त्यो सम्भव थिएन र भएन पनि ।
प्रचण्डका कार्यकर्ताले गरेको हुटिङमा इन्जोय गरिरहेका माधव नेपालले प्रचण्डलाई नै सरापेको सुन्नपर्ने दिन टाढा छैन । किनकि दुई अध्यक्षको व्यवस्थाले नै नेकपा विभाजनसम्म पुगेको विश्लेषण आउन थालिसकेका छन् ।
प्रचण्डका लागि सूर्य चिह्न भावनात्मक विषय होइन, रणनीति हो । पूर्व एमालेको ठूलो पंक्ति अहिले पनि सूर्य चिह्न कसले पाउँछ ? भनेर पर्खिरहेको छ । दुवैतिर नखुली बस्ने कार्यकर्ताको तल्लो पंक्ति बुझेरै सूर्य खोसाखोसमा परेको हो ।
त्यसैले प्रचण्डले माधव नेपालभन्दा ठूलो स्वरमा सूर्य चाहिन्छ भनेर बोल्नु परेको छ । जीवनमा कहिल्यै सूर्य चिह्नबाट उम्मेदवार नबनेका प्रचण्ड र पूर्व माओवादी नेताहरु निर्वाचन आयोगमा सूर्य चिह्न अंकित झण्डा बोकेर हिँड्नु पर्ने बाध्यता त्यसकै उपज हो ।
निर्वाचन आयोगले सूर्य कसलाई दिन्छ ? त्यो कानुनी लडाइँको विषय भयो र हुनसक्छ अदालतसम्म पुग्दा सूर्य चिह्नको मुद्दा नटुंगिएर तत्कालका लागि दुवै पक्षले नपाउने पनि होला । तर त्यसले प्रचण्डलाई फरक पर्दैन, पर्ने चाहिँ २०४८ देखि नै पार्टीको नाम भन्दा पनि सूर्य चिह्न चिनेका साधारण मतदाता र एमाले पंक्तिलाई नै हो ।
जसरी, जे गरेर भए पनि शक्तिमै रहने ट्याक्टिसमा खप्पिस प्रचण्डबाट माधव–झलनाथ पक्षका कार्यकर्ता अहिले शंकाको सुविधा दिदै ओलीविरुद्ध भने एकजुट हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
यसको फाइदा ओली पक्षले स्वभाविक रुपमा लिएको छ । गाउँ तहका पूर्व एमालेका कार्यकर्ताले ओली र प्रचण्ड छान्दा स्वभाविक रुपमा अ‍ोलीतिर लाग्ने अवस्था बन्यो । त्यो किन पनि स्वभाविक हो भने, गाउँसम्म पुग्दा पूर्व माओवादी जति सर्लक्कै प्रचण्ड–माधव पक्षमा लागेपछि पूर्व एमालेहरु एकातिर हुने अवस्था बन्यो ।
जिल्ला भन्दा माथि एमाले पंक्ति आधा आधा र अझ धेरै माधव नेपालतिर लागेको देखिए पनि तलसम्म पुग्दा फरक अवस्था छ । विभाजित पार्टीमा प्रचण्ड हावी त्यसै पनि हुने निश्चित छ । किनकी एकता गर्दा पूर्व माओवादीले पाएको करीव ४५ प्रतिश हिस्साको बढीमा ५ प्रतिशत बाहेक सबै उनीसँगै छ ।
पूर्व एमालेको करीव ५५ प्रतिशत नै माधव पक्षमा लागे भए पनि त्यो शक्ति प्रचण्डभन्दा आधा नै हो । अहिले विभाजनको तात्तातो बेलामा ओलीविरुद्ध गाली बर्साउन एक भए पनि प्रचण्ड–माधव पक्षको शक्ति समीकरण केही समयमै खल्बलिन थाल्नेछ । किनकी त्यहाँ नेता धेरै छन् ।
‘एमाले ब्राण्ड’ विभाजन: प्रचण्डको सफल प्रयोग
प्रकाशित: २०७७ माघ १ गते १३:५१